Yintoni echanekileyo Idata kwiStatisti?
Kwizibalo, ixabiso lenkcazelo libala kwaye lifunyenwe ngokubala okanye ukulinganisa nokuchasene neeseti zeenkcukacha ezifanelekileyo , ezichaza iimpawu zezinto kodwa zingenayo inamba. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuba iinkcukacha ezithintekayo zivela kwiinkcukacha. Ngalunye lwezinto ezilandelayo ngumzekelo wedatha yokubala:
Iziphakamileyo zabadlali kwiqela lebhola lebhola
Inani leemoto kumqolo ngamnye wokupaka
Ipesenti yebakala labafundi eklasini
Imilinganiselo yamakhaya asekuhlaleni
Ubomi bebhetch yecandelo elithile lekhompyutha.
Ixesha elichithwe elinde kumgca wabathengisi kwivenkile.
Inani leminyaka esikolweni kubantu ngabanye kwindawo ethile.
Ubunzima bamaqanda athatyathwe kwinkukhu yenkukhu ngosuku oluthile lweveki.
Ukongezelela, i-data eninzi ingaphinda iphulwe kwaye ihlaziywe ngokwezinga lokulinganisa elibandakanyekayo kubandakanywa ukutyunjwa, u-ordinal, ixesha, kunye namanqanaba omlinganiselo wokulinganisa okanye nokuba ngaba iisethi zeenkcukacha aziqhubeki okanye zidibene.
Kwimibare, kukho iindlela ezahlukahlukeneyo apho ubuninzi okanye iimpawu zezinto ezinokulinganiswa kwaye zibalwe, zonke ezibandakanya amanani kwiiseti zeenkcukacha ezithintekayo. Ezi datshuthi azihlali zibandakanya iinombolo ezingabalwa, ezimiselwe lizinga ngalinye leedatha zeesilinganiselo:
I-Nominal: Nawaphi na amanani enani kumgangatho ophakanyisiweyo wokulinganisa akufanele aphathwe njengoluhlu oluthile. Umzekelo wale nto uza kuba yinombolo yejezi okanye inombolo yesazisi yomfundi. Akunakuqonda ukwenza naluphi na ukubala kulezi zinombolo zamanani.
I-Ordinal: Idatha yokubaluleka kwinqanaba le-ordinal yokulinganisa ingalawulwa, nangona kunjalo, umahluko phakathi kwamanani awunanto. Umzekelo wedatha kule nqanaba yokulinganisa nayiphi na uhlobo lokubeka.
I-Interval: Idatha kwinqanaba lexesha liyakunikwa kwaye ukungafani kungabalwa ngokucacileyo. Nangona kunjalo, idatha kule nqanaba ayinalo iqalo lokuqala. Ngaphezu koko, ukulinganisa phakathi kwexabiso lwedatha alunanto. Ngokomzekelo, i-90 degrees Fahrenheit ayikho kathathu ishushu njengoko i-degrees ezingama-30.
Ukulinganisa: Iinkcukacha kwizinga lokulinganisa umlinganiselo alinakulawulwa kuphela kwaye zikhutshwe, kodwa zikwahlukana. Isizathu salokhu kukuba le datha inenani elithile okanye iqalo lokuqala. Ngokomzekelo, isilinganisi sokushisa kweCelvin sinomlinganiselo ongenanto .
Ukuchonga ukuba yeyiphi na amanqanaba okulinganisa i-data ebekwe phantsi phantsi kuya kunceda abanomgcini-nkcukacha ukuba bafumane ukuba ngaba i-data ingabalulekanga ekwenzeni izibalo okanye ngokubhekisele kwisethi yedata njengoko imele.
Ecacileyo kwaye eqhubekayo
Enye indlela idibanisa yolwazi ingafakwa ngayo ukuba ngaba iiseti zeenkcukacha zichanekile okanye ziyaqhubeka-ngalinye lemiqathango inamacandelo onke emathematika azinikezele ukuba afunde; Kubalulekile ukuhlukanisa phakathi kwedatha edibeneyo kunye nokuqhubekayo kuba kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo.
Isethi yedatha ayicacile ukuba ixabiso lingahlukana. Umzekelo oyintloko wale nto yiseti yemvelo .
Akukho ndlela apho ixabiso lingaba yinxalenye okanye phakathi kweyiphi na manani onke. Oku kusekwe ngokwemvelo xa sibala izinto eziyiluncedo xa ziphela njengezihlalo okanye iincwadi.
Idatha eqhubekayo xa kubakho abantu abamele ukusetywa kwedatha kunokuthatha nayiphi na inamba yangempela kwixabiso lexabiso. Ngokomzekelo, izisindo zingabikwa kwii kilogram kuphela, kodwa kunye negramu, kunye ne-milligram, ii-micrograms njalonjalo. Idata lethu lilinganiselwe kuphela ngokuchanekileyo kwezixhobo zethu zokulinganisa.
Inkcazo yeTetrareta - I-Glossary Chemistry
Iimpawu ezihambelana neTrès
Phrinta kwiSicelo: Ukuguqula iiPayipi zakho kwizipho kunye neNzuzo
I-Blood Fake Recipes